Manohana ny Filoha Marc Ravalomanana ny Malagasy – MyDago.com aime Madagascar
Raha niantomboka t@ J.Sylla dia avy eo narahin’I A. Andriamiseza, sy Raharinaivo, ary Yves Aimé Rakotoarisoa ny famadihany dia hita fa ireo mpanao politika malagasy dia tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany manokana.
Ny mpanogam-panjakana moa dia efa fantatra mazava tsara fa mpanao afera sy mpangalatra daholo, hampanodidina ny KOBANA, SAVONNERIE TROPICALE, QUINCAILLERIE 200 sns… ireo no teny fahavalom-pirenena ka vidian’ny frantsay ka manao izay hamphanatrany Malagasy hatrany @ taranaka fara-mandimbiny.
Eto kosa no hilazana ampahibemaso fa manohana 100% nt filoha Ravalomanana ny Ankabatsahan’ny Malagasy na eto an-toerana na any ampita.
Vao avy nanao fanambarana izao ny GTT INTERNATIONAL-GENEVE fatsy miala @ filoha RAVALOMANANA ary manameloka ny famadihan-dry Yves aimé Rakotoarisoa sy ny forogony.
Ny fikambanana MA.MI.FI n any Malagasy Mila FIlaminana dia tsy miala @ filoha RAVALOMANANA ka izay miaraka @ Yves Aimes Rakotoarisoa dia mandeha @ anarany irery fa tsy @ anaran’ny fikambanana.
Ny fikambanana KA SAHIA, dia manameloka ny mpanogam-panjakana sy ireo manamafy ny fahefany toy ny mpamadika sy Ingahy Simao izay mitongila ka hiteraka olana mafimafy ihany hoan’ny Malagasy.
Ny GTT Phillipines Izay mandray anjara eo @ izay tandrify ho @ fiverennana @ ara-dalana.
dia mijoro hoan’ny Tanindrazana ka manohana tanteraka ny filoha RAVALOMANANA.
Ny GTT Chine dia manindry mafy fa ny masoivoho Victor Sikonina izay notendren’ny filoha RAVALOMANANA dia manohina ny mpanogam-panjakana. Ny GTT Chine dia manamelokoa tanteraka ny famadihana nataon’I Yves Aimes Rakotoarisoa sy ny forogony ary mbola manohana sy hanohana hatrany ny filoha Marc RAVALOMANANA. Ary efa mandray ny andraikiny ny 2 izay sym bola hanohy ny fandraisany andraikitra.
Ny vondron’ny tantsaha na PROLIMAR dia mijoro sy miaro tanterakan y tombotsoan’ny vahoaka kany filoha RAVALOMANANA irery ihany noantoka @ izany aloha hatramin’izao
Eto am-pamaranan ny antitraterina tsara fa ny ankolafy telo izay ezahin’ny FAT ho sarahina dia miray hina. Izany hoe @ miaraka @ fametrahana ny rafitra tetezamita iraisana, ny famoahana ny gadra politika, ny fiverenan’ny filoha Marc RAVALOMANANA eto an-tanindrazana ka ahafahany miltasaka ho fidiana, ny famahana ireo aino aman-jery, ny fikarakarana ny fifidianana iraisana ary ny fitsaharan’ny fanenjehana… Raha mbola tsy ireo dia hijoro sy hihamafy hatrany ny fanohenran’ny Zanak’I Dada.
MANOHANA NY FILOHA MARC RAVALOMANANA HATRANY
Auteur LazalazaoPublié le 12 mars 2011 12 mars 2011 Catégories Malagasy, PolitiqueÉtiquettes GTT, Marc Ravalomanana
13 réflexions sur « Manohana ny Filoha Marc Ravalomanana ny Malagasy »
Tsy misy tsy manohana ny filoha Ravalomanana ange e!, ny mouvance Ravalomanana no nitaky ny hanaovan’ny C.I indrindra fa ny SADEC ny médiation (satria sahala ny biby ny mpanao politika malagasy tsy mahay miresaka na mifandefitra kely nefa raharaham-pirenena no resahina dia voatery maka mpanelanelana)io feuille de route io no vokany donc tokony ekana , tsy ho afam-po 100% ny tsirairay satria ny hevitry ny rehatra no nafangaro, satria raha izao ny fandehany dia ho lazaina fa mpamadika daholo ny SADEC, ny UA, ny ONU…
12 mars 2011 à 10 h 47 min
« hevitry ny rehatra no nafangaro ». Ary toa tsy mba voatsikaritroizany. Ny hitako dia tsy nanotaniana akory ny ankolafy Zafy sy ny ankolafy Ratsiraka. Ary tsy noraisina akory ny fanitsiana natolotry ny ankolafy Ravalomanana.
Ilay feuille de route dia milaza fa ii andry rajoelina izay nanogam-panjakana no filoha ary izy no manendry ny olona ao @ andr-mpanjakana rehetra.
Ny nanotanina t@ io feuille de route io dia ny UDR, ESCOPOL, TGV… nahita mpanohitra ve ianareo ?
Ilay mpanelanelana lasa mpitsara dia hita fa niova hevitranohon’ny tsindry azo avy tany @ ireo sampana ao @ frantsafrika isan-karazy (OIF, COI, ambassade de Fracne eto M/kara, ny minisitry ny raharahambahiny frantsay sy ny minisitry ny fiaraha-miasa Raincourt)
Dia ahoana ny gadra politika, ny momban’i Ravalo? ny fikarakarana ny fifidiana ? tsy mahavaha olana ilay feuille de route…
Maninona raha tonga dia milaza, fa ny didin’ny be sandry no tokony tsy maintsy arahina ?
Manombok’izao, dia izay mahavita fanongam-panjakàna no mitantana ny baolina ?
Foany koa ny Lalàna rehetra ! Aminareo efa tsy misy dikany intsony izany hoe Lalàna izany !
Pays du bordel no tiavanareo an’i Madagasikara ! Mbola ho jereko koa moa ny misy an’ilay artikla, fa noho ny nataonareo, dia lasa makorelina daholo hono ny VEHIVAVY MALAGASY !!
Tananarive, la ville des milles…putes !!! Miakatra manao kôxa ao Tana daholo ny avy any amoron-tsiraka, ny very asa rehetra ao afovaon-tany ; rehefa tsy afaka mivarotra anana sy voatabia, voan-javatra hafa no amidy ! Ny tsy manana diplaoma moa, dia ny diplaoma natoraly sisa no ampiasaina ! Mety misy havanareo akaiky na lavitra voan’izany !
Ny promotion canapé, tsy lazaina intsony !
MAHAMENATRA !!! Réalisme izany !!
Ny Filoha Ravalomanana dia nihezaka hatrany, mba ahitan’ny vahoaka asa, mba zavatra mendrika no azahoam-bola, fa tsy halatra sy fivarotan-tena !!
Mitady réalisme ianao io, lazao ny mpanongana hiala teo !! Asaivo manara-dalàna ry zareo ! Hilamina ny tany sy ny fanjakàna !!! Avereno amin’ny toerana nisy azy ny Filoha Ravalomanana, izay nofidian’ny Vahoaka malagasy ary mbola ANDRASANY !
Aza modiana tsy hita ireny vahoaka marobe niandry azy ireny !
Lazao ny miaramila hijanona any amin’ny casernes misy azy rehetra any ! I Omar no niteny an’izay tamin’ny 15 sa 16 mars 2009, dia ny 17 no natao ny fanonganam-panjakàna !
Amin’izay ho hitanareo ny isan’ny vahaoka mitady ny tena Filohany, fa tsy io domelina Filou-nareo io !!! Filou, imbu de sa personne, prétentieux, retors, malhonnête, pleutre, vantard, spécialiste des racontars et bobards,…
Hormis son physique qui n’a rien de sensationnel, il est un musée vivant de tous les défauts de l’être humain !
12 mars 2011 à 11 h 41 min
Cette feuille de route, elle est tout, sauf Consensuelle, Inclusive, et Neutre !!!
Deux ans de perdus pour en arriver là !
A tous les légalistes de faire le nécessaire, pour dénoncer cette tentative de légitimation, du Coup d’Etat pérpétré par domelina et ses comparses !
Nous ne resterons pas les bras croisés ; nous sommes dans l’ère de l’éléctricité et des ampoules, aussi, ne prendrons-nous jamais des vessies, pour des lanternes !!
12 mars 2011 à 12 h 01 min
Voaporofo amin’izao fotoana fa ny FIRAISANA NO HERY !
Mahaga ahy mihitsy ny TSY HITAMBARAN’NY HERY MANOHANA NY PREZIDA RAVALOMANANA !
Tsara angamba ny mametra- panontaniana hoe : inona no antony ?
Ny faniriako manokana mantsy dia miray ho antoko iray ihany
Ny TIM sampana Ravalomanana
ny KA SAHIA
Tokony ireo antoko ireo samy manao izay azo atao mba hifanatonana, ny andaniny sy ny ankilany !
Isika malagasy koa anie samy be ambom-po diso tafahoatra e !
Adinoko, fa inona moa no misakana ny GTT tsy ho Antoko politika ???
Mino aho fa io no mety ho Antoko matanjaka indrindra raha toa ka …
12 mars 2011 à 13 h 57 min
Ny TIM dia i Ravalomanana no namoron’azy ! Lasa néologisme angamba ilay hoe : Sampana Ravalomanana.
Ao anatin’ny antoko ary efa voalaza teto izany, izay tsy manaraka ny règlements dia tokony miala na « roahina » ! Noho izany, na ianao miaraka aminy, na tsia !
Izay no nahatonga azy hilaza hoe : Mouvance Raharinaivo lazaina fa tsy mouvance Ravalomanana na TIM !
Tao anatin’ny MODEM nisy ny tsy faly dia lasa nanangana ny Nouveau Centre izay miaraka be amin’ny UMP ! Ny MODEM nitazona ny hazon-damosiny !
Tsy azo atao ny misoloky amin’ny vahoaka !
Ny tsara atao izao, dia manao ny lisitrin’izay antoko sy fikambanana, manohana ny Ara-dalàna, ny Fiandranam-pirenena sy ny Fiverenan’ny Filoha Ravalomanana !
12 mars 2011 à 17 h 19 min
« Ny tsara atao izao, dia manao ny lisitrin’izay antoko sy fikambanana, manohana ny Ara-dalàna, ny Fiandranam-pirenena sy ny Fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ! »
Efa niteny momba io ihany aho hoe : tsy tsara mihitsy ity fisaratsaraham-bazana ity, fa ny mitambatra ihany no hery !
-Ary tsy mazava amiko mihitsy ny nahatonga fiforonana « fikambanana » fa tsy antoko politika;
Amiko raha vao miala amin’ny fakany na manohana aza,dia efa mampiseho fisarahana ka izay misaraka dia fasika !
Mba tsara angamba raha mba mahazo hevitra toy ny hevitr’i LAZALAZAO sy Alidera ??? na ny sasany koa tsy misy avahana akory fa ireo no tonga ao an-tsaiko !
Mankasitraka ny voalazanareo ny tenako.Efa nilaza ihany aho fa tokony hatao mihintsy izay hampiray ny antoko rehetra manohana ny ara-dalana,ny fiandranam-pirenena ary ny fiverenan’i Ravalomanana.Tokony tsy asiana zanak’i kala hafa na ny ankolafy Zafy na ny ankolafy Ratsiraka satria iray ihany ny tanjona.Ny mahavoantsika indrindra ao amin’ny GTT dia nisy fotoana nisy nisitaka satria mieritreritra azy ho matsilo saina loatra noho ny hafa dia mitady hanindry ny sasany.Tokony ho ampirinina any anatin’ny tena izay fanambonian-tena izay dia miara-miasa sy miara-mamindra isika rehetra mba ho tonga amin’ny tanjona kendrena.Akanga maro tsy vakin’amboa.
12 mars 2011 à 20 h 29 min
Bemafohy-> Ilay resaka GTT dia efa milamina tsara tokoa izao ny any Frantsa, sy ny erantany mihintsy aza, ary miara-miasa daholo ny rehetra ankehitriny. Allélouia
Arakin’ny tenin’ny flloha dia OUSTE MIALA izay te handeha fa isika tsy mila be fandraofana toy ny foza à 10 pattes. L’avenir nous dira qu’on a raison!
13 mars 2011 à 8 h 35 min
Faly miarahaba anareo rehetra !
Izany resaka izany moa dia indrisy fa mijanona ho antsika eto ihany, raha tsy hoe misy mandefa hafatra tena sérié angaha !
Ny tena fahavoazantsika malagasy koa anie dia efa lomorina loatra ny saina e ! notazain’ireo alika bvazaha ireo, indrindra ny ankizy ankehitriny, ka izany mba hoe : sens d la Responsabilité izany dia latsaka ambany dia ambany mihitsy, ary tsy afaka ny hametrahan-toky amin’ny zavtra kendrena ho atao mihitsy !
Ilay fitaizantsiana toa tsy misy intsony, fa ny masaka ao an-tsaina dia ny « samy mandeha, samy mitady ».Ilay fiainana koa etsy andaniny manampy trotraka !
Noho izany hatrany ampianarana mihitsy no tokony hisy fitaizan-tsaina vaovao ! Manomboka amin’ny Mpampianatra izay tokony hanome Ohatra ny Mpianatra ! Mazàna anefa dia ny Mpampiantra indray no manome ohatra mampidi-doza ny ankizy mandrakariva!
Tena Programa iray manontolo mihitsy izany eo amin’ny Firenena raha dinihina !
Mba manao ahoana izany fampianarana Teny SY Fomba Malagasy izany amin’izao fotoana ???
Ireompanao poritika moa dia efa tsy afaka intsony ny hiasa amin’ny TENA TENY MALAGASY, fa vary amin’anana daholo izay atao, anefa asian’ny vazah fandrika teny kely fotsiny, dia efa very an-javony.
– Ireo Mpanao politika ireo anie raha tena jerevana tsy manana ny fari-pahaizana afaka ny hizaka Fitondràna akory ny 80% e ! Aiza no tsy ho very ny Firenena !
Izany mitambatra no mahatonga ny fisaraham-bazana misy amin’ny Antoko Politika !
Fa naniiiiiiinona ary no tsy nisy tohiny ity resaka ity r’i LAZALAZAO ?
13 mars 2011 à 16 h 59 min
Mamaaky tsara sy manaraka tsara aho ka. Ny @firahana’ndia tsara ny mamaritra fa ny MA.MI.FI sy ny KA SAHIA dia fikambanana mifanakaiky . ny KA SAHIA dia nitsanagana t@ 2002 t@ fanohanana ny filoha Marc Ravaalomanana, tao Montpellier France. ary ny MA.MI.FI dia nitsanagana teo @ 13 mai t@ foza teny, nitondra ilay banderolle misy soratra hoe NON A LA GREVE. tonga moa diaad y no navalin’ny foza an’izany.
Maro ireo antoko politika sy mpanao polifika mitady hividy ny MA.MI.FI ka izay indrindrs no nahatonga ny fikambanana hanao fanambarana. tsy antoko politika anefa ny MA.MI.FI, ary tsy mitady toerana, fa manainga kosa ny fikambanana handray anjara @ fiainanam-pierenena @ endriny rehetra. Ohatra ny fanaraha-maso ny fifidiana. Fa tsy ny filtsahana akory, fa i Dada ihany no milatsaka raha ny hevitry ny MA.MI.FI.
Ny MA.MI.FI dia efa ao anatin’ilay fikambanana zanak »i Dada, izay misy ny fikambanana manohana ny filoha Ravalomanana rehetra.
Farany, dia mbola miantso ny fiaraha-miasa sy ny firaisakinan’ny rehetra @ famerenenana ny ara-dalana . Ary indrindra @ fiverenan’ny filoha Ravalomanana sy ny fahafahany milatsaka ao anaty fifidianan iarahana mitkarakara, ary ny fivoahan’ny gadra politika sy ny fitsaharana’ny fanejehana rehatra. Ary ny fahalalahana’ny aino aman-jery
NB: Aza hadino ny Radion’ny Gasy
Précédent Article précédent : Photos – Antanimena 11/03/2011
Suivant Article suivant : Communiqué de l’association MA.MI.FI.